Fitaovana sary kapila. Clone Drive & Disk. Rindrambaiko kopian'ny kapila.
DataNumen Disk Image dia fitaovana matanjaka handefasana sy hamerenana ireo kapila na kapila. Izy io dia afaka mamorona sy mamerina amin'ny laoniny ilay sary kapila na mandefa byte byte byte. Ilaina amin'ny backup & fanarenana data, kopian'ny disk / drive & cloning ary forensic.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,626)
Nahoana DataNumen Disk Image?
Novambra 8th, 2019
Ny Disk Image dia nihoatra ny fandaharana matihanina telo hafa izay tsy nahavita namorona sarina rafitra ISO - io dia niasa lavorary. Na dia tsy mety
Bostamin'ny, MA, Etazonia
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Disk Image v2.2
Tohano ny karazana kapila sy kapila rehetra.
Tohano hamerenana amin'ny laoniny ireo data data.
Fanohanana handraisana angona angona avy amin'ny haino aman-jery maloto.
Fanohanana hanoloana ireo sehatra simba amin'ny angona voatondro.
Tohano hanakanana kapila maro sy kapila maromaro.
Mety ampiasaina ho fitaovana forensika solosaina ary fitaovana fikarohana elektronika (na e-Discover, eDiscovery).
mampiasa DataNumen Disk Image mamorona sary ho an'ny fiara sy kapila
miaraka DataNumen Disk Image, azonao atao ny mamorona sary ho an'ny kapila sy kapila, ho an'ny tanjona maro samihafa, toy ny backup, famerenana amin'ny laoniny, forensika ary fanarenana data.
Fanamarihana: Alohan'ny hamoronana sary drive na kapila DataNumen Disk Image, azafady manakatona fampiharana hafa.
Safidio ny kapila na kapila manana ny sariny noforonina:
Raha nametaka kapila USB ianao fa tsy mahita izany ao anaty lisitry ny kapila na kapila. Azonao atao ny manindry ny
bokotra ary manandrama indray.
Avy eo, apetraho ny anaran'ny fisie sary:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie sary na tsindrio ilay
bokotra hijerena sy hisafidianana ny rakitra fisie.
bokotra, ary DataNumen Disk Image start cloning ny data ao anaty kapila na disk voatondro, avy eo tahirizo ao anaty rakitra fisehoana sary. Bara fandrosoana
dia hanondro ny fivoaran'ny klone.
Aorian'ny fizotran'ny klone, raha noforonina soa aman-tsara ny rakitra sary, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao dia afaka mampiasa ny sary kapila ho an'ny tanjona samihafa, ao anatin'izany:
Ampiasao izy io ho toy ny backup an'ny kapila na kapila tany am-boalohany.
Avereno amin'ny kapila na kapila tany am-boalohany ilay sary, na amin'ny kapila na kapila hafa.
Avereno angona avy amin'ny sary.
Manaova fanadihadiana momba ny angona forensika amin'ny sary.
DataNumen Disk Image 2.2 dia navoaka tamin'ny 24 Desambra 2020
DataNumen Disk Image Navoaka tamin'ny 2.0 Novambra 9 ny 2020
DataNumen Disk Image 1.9 dia navoaka tamin'ny 14 Jona 2020
DataNumen Disk Image 1.8 dia navoaka tamin'ny 1 Febroary 2019
Hatsarao ny asan'ny famerenana kapila.
DataNumen Disk Image Navoaka tamin'ny 1.6 desambra 12 ny 2016
DataNumen Disk Image 1.5 dia navoaka tamin'ny 18 Janoary 2015
Tohano hamerenana amin'ny laoniny ireo sary mankany amin'ny kapila.
DataNumen Disk Image 1.1 dia navoaka tamin'ny 21 Oktobra 2014
Hatsarao ny haingam-pandeha.
Manampia fampahalalana statistika momba ny fizotran'ny klone.
DataNumen Disk Image 1.0 dia navoaka tamin'ny 9 septambra 2014
Tohano ny Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 ary ny Server 2003/2008/2012.
DataNumen Backup no fitaovana tsara indrindra hananganana sy hamerenana amin'ny laoniny ny angon-drakitra manan-danja sy ny fisie.